BusyBox 63 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 63 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ထိုအခါ Busy Box Pro ကိုသာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ယခုရောင်းချမှုအပေါ်ပါ!
အလျင်မြန်ဆုံး, အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့် # 1 ထိုအခါ Busy Box installer ကိုတပ်ဆင်ထားမှုကိုဖြုတ်မည်!
သန်း 20 ကျော်သွင်းယူမှုများနှင့်5100,000 ကျော်စတား ​​ratings!
devices များအခြေစိုက်လက်မောင်းနှင့် Intel များအတွက်ပံ့ပိုးမှု, မကြာမီလာမည် mips ထောက်ခံမှု။ (ငါ mips device ကိုလိုအပ်ပါတယ်)
အသစ်က XDA-Developers ကစာအုပ် ": Rooting, ROM တွေကိုနှင့် theme မှအပြီးအစီးလမ်းညွှန် XDA Developers '' အန်းဒရွိုက် Hacker ရဲ့ Toolkit ကို" တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့
Handster ကနေတဆင့် Android အတွက်အကောင်းဆုံး Utility ကို Software ကိုဆုဆုရှင်ပါ။
ဤကြော်ငြာအခမဲ့နှင့်မျှမတို့အင်တာနက်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်တစ်ခုတည်းသော installer ကိုပါ!
http://busybox.net/products.html: မှာထိုအခါ Busy Box က်ဘ်ဆိုက်ပေါ် Featured
အဆိုပါထိုအခါ Busy Box source code ကိုကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်: http://git.busybox.net/busybox/
တစ်ဦးကမဆိုအမြစ်တွယ်ဖုန်းရှိရမည်! နီးပါးအမြစ်တွယ် applications များသင်ပြီးတော့အမြစ်တွယ်ဖုန်းကိုရှိပါကသင်သည်ထိုအခါ Busy Box လိုအပ်တယ်, သူတို့ရဲ့မှော်ဖျော်ဖြေဖို့ထိုအခါ Busy Box လိုအပ်ပါသည်။
Pro ဗားရှင်း, (ဘေးကင်း installs များအတွက်) Backup ကိုအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်ဖယ်ရှားရန်အင်္ဂါရပ်, ကြိုတင်ပေးစမတ် feature ကို install လုပ်, သင်လိုချင်တဲ့ applets ကောက်လက်နိုင်စွမ်း, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစတင်ပေါ် applets ပျောက်ဆုံးများအတွက်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြုံငုံထောက်ခံမှု။ အဆိုပါလိုလားသူဗားရှင်းအခမဲ့ဗားရှင်းအလိုတော်ထက်ပိုမကြာခဏ updates များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ငါထိုအခါ Busy Box ကိုရေးဘူး ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ! ငါ Android အတွက်ထိုအခါ Busy Box ပြုစုဒီ installer ကိုနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်သို့မဟုတ်များအတွက်အကြောင်းကို menu ကို option ကိုကြည့်ရှုပေးပါ: www.BusyBox.net
ထိုအခါ Busy Box အများကြီးပိုကြီးတဲ့ (သို့သော်ပိုပြီးနိုင်စွမ်း) ကို GNU Core အသုံးအဆောင်များနှင့်တူ, များစွာသောစံ Unix tools တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကို application ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ Busy Box ပါဝင်သော devices များနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့်စံပြစေသည်ဖြစ်သော Linux kernel နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်သေးငယ်တဲ့ဟာ executable ဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ Self-ဟုအမည်ပေးထားသည့် "နှစ်မြှုပ်ထားသော Linux ကို၏ဆွစ်ဇာလန်ကြည်းတပ်ဓား" ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်အမြဲထိုအခါ Busy Box ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရဖို့လိုလျှင် installed ဒီ Leave!
sf49ers စတိုး 37.9k 12.97M
APK ဗားရွင္း 63
ထုတ်လုပ်သူ Stephen (Stericson)
Release date: 2019-08-24 19:48:26
လက်မှတ် SHA1: 68:38:DB:58:B5:98:9B:83:3B:5D:62:AC:B4:C1:E0:1B:28:EE:9E:67
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Stephen Erickson